KIA Archives - Factcrescendo Myanmar | The Leading Fact Checking Website
May 13, 2022 May 13, 2022 နေရာမောင်LeaveaComment on Fact Check: KIA တပ်ရင်းနဲ့တပ်မဟာတွေကို မြန်မာစစ်တပ်လေကြောင်းက တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလား-မဟုတ်ပါ
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(KIA)ရဲ့ တပ်ရင်းနဲ့ တပ်မဟာတွေကို မြန်မာစစ်တပ်က လေကြောင်းက တိုက်ခိုက်နေပုံအဖြစ် ဓာတ်ပုံ ၁ ပုံ ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူတွေ အကြား ပျံ့နှံ့လျှက်ရှိပါတယ်။ ဓာတ်ပုံထဲမှာ အဝေးတစ်နေရာက အဆောက်အဦးတွေဆီကနေ မီးခိုးတွေ ပျံတက်နေတာကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ သတင်းမှားတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံဟာ ချင်းပြည်နယ် ထန်တလန်မြို့ကို “KIA..ဂွမ်မော်…ဖင်ကျယ်တော့… KIA.ရင်း.၁၄..ရင်း.၆..တပ်မဟာ..၉.. လင်းယုန်တွေ…အစာကြွေးနေပြီ.. 10-5-22..အာရုံဦး…NCA..ဖောက်ဖျက်.ဆုံးမခြင်း..သင်ခဏ်းစာ. Sittway Thitsar @ကရင်ပြည်နယ်”လို့ရေးသားပြီး “Fighterforce Fighterforce”အမည်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ် အသုံးပြုသူက အောက်ပါအတိုင်းမျှဝေထားပါတယ်။ မူရင်းလင်ခ့် – Fb link | Archive link အလားတူမျှဝေမှုတွေကို ဒီနေရာ၊ဒီနေရာ၊ဒီနေရာ၊ဒီနေရာနဲ့ ဒီနေရာမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ အချက်အလက်စိစစ်ချက် Google မှာ ဓာတ်ပုံအွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ ရာဇဝင်ကိုရှာဖွေကြည့်ရာမှာ ဒီဓာတ်ပုံဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၉ […]
March 5, 2022 March 5, 2022 နေရာမောင်LeaveaComment on Fact Check: ၂၀၁၅ ခုနှစ်က KIA တပ်ကြပ်တစ်ဦးအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့ပုံကို လက်ရှိအဖြစ် အပျက်အဖြစ်မျှဝေ
စစ်စိမ်းရောင်ပျောက်ကျားအင်္ကျီဝတ်အမျိုးသားတစ်ဦးဓာတ်ပုံနှင့်အတူ ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်(KIA) တပ်မဟာ ၁ လက်အောက်ခံ တပ်ကြပ်ကြီးတစ်ဦးဟာ စစ်ကောင်စီထံ အလင်းဝင်လာတယ်လို့ ရေးသားထားတဲ့ ပို့စ်တစ်ခု ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိပါတယ်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်က မြစ်ကြီးနားမြို့နေ ဇနီးမောင်နှံကို ပူတာအိုမြို့မှ အပြန် ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ် ခင်ဒူယာန်ကျေးရွာအထွက်မှာ KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့ ကားရပ်ခိုင်းတာ မရပ်လို့ ပစ်သတ်တာကို မကျေနပ်လို့ အခုလို အလင်းဝင်တာလို့လည်း ဒီပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ပို့စ်တွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ သို့သော် ဓာတ်ပုံပါအမျိုးသား ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်းက KIA ဆီကအလင်းဝင်လာတဲ့ အမျိုးသားဖြစ်တာ တွေ့ရပါတယ်။ အောက်ပါစာသားတွေကတော့ ဓာတ်ပုံနဲ့အတူ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိတဲ့ပို့စ်ပါ စာသားအချို့ဖြစ်ပါတယ်။ “ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာ ၁ လက်အောက်ရှိ တပ်ရင်း ၇ မှ […]
Fact Check: ဒီဗွီဒီယိုက KIA ပစ်ချလိုက်တဲ့ ရဟတ်ယာဉ်နဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ
May 4, 2021 May 4, 2021 နေရာမောင်LeaveaComment on Fact Check: ဒီဗွီဒီယိုက KIA ပစ်ချလိုက်တဲ့ ရဟတ်ယာဉ်နဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ
ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီး ပျံသန်းနေစဉ်အတွင်းမှာ မီးလောင်ပျက်ကျသွားတဲ့ဗွီဒီယိုကို ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (KIA)က ပစ်ချလိုက်တဲ့ ဗွီဒီယိုလို့ရေးသားထားတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပို့စ်ကို လူထောင်ဂဏန်းက ပြန်လည်မျှဝေ လျှက်ရှိပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ဒီဗွီဒီယိုဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ကတည်းက အင်တာနက်မှာပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီးဖြစ်တာတွေ့ရပြီး ဆီရီးယားမှာရဟတ်ယာဉ် ပြစ်ချခံရမှုဖြစ်ပါတယ်။ “KIAက မအလ တိုက်လေယဉ်ကြီးပြစ်ချလိုက်တာ အဘရေမတော့ဘူး လိုအော်ပြီး ဒိုင်းဆိုပေါက်ကွဲသွားတာ 😂😂😂အားရချက်ကွာ ပတ်ဗေပုံ ပတ်ဗေပုံ ပတ်ဗေပုံ ဂျီ့”လို့ေရးသားပြီး “Zaw Aung Aung”အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူက မေ ၃ ရက်မှာ မျှဝေထားရာမှာ ပြန်လည်မျှဝေသူ ၁ ထောင် ၅ ရာဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ အလားတူရေးသားမျှဝေမှုတွေကို ဒီနေရာ၊ ဒီနေရာ၊ ဒီနေရာ၊ဒီနေရာ၊ ဒီနေရာနဲ့ ဒီနေရာမှာလည်း ေတွ့ရပါတယ်။ မူရင်းလင်ခ့် – Fb link | Archive […]
ကချင်ပြည်နယ်က ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(KIA)ရဲ့ အလောဘွမ်စခန်းကို လာရောက်တိုက်ခိုက်ရင်း ကျဆုံးခဲ့တဲ့ မြန်မာစစ်တပ်မှတပ်ရင်းမှူးအဖြစ် အရာရှိတစ်ယောက်ဓာတ်ပုံ၊ လက်နက်ခဲယမ်းပုံများနှင့်အတူရေးသား မျှဝေ ထားရာမှာ ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူ ထောင်ဂဏန်းက ဒီပို့စ်ကို ပြန်လည်မျှဝေလျက်ရှိပါတယ်။ မြန်မာစစ်တပ်ဘက်က ခလရ ၄၃၇ နဲ့ ခလရ ၃၈၇ တပ်ရင်း၂ ရင်းနဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့သလို လေကြောင်းကနေလည်း ပစ်ကူတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ တပ်ရင်းမှူးအပါအဝင် တပ်ရင်း ၂ ရင်းစလုံးကျရှုံးခဲ့တယ်လို့လည်း ရေးသားထားပါတယ်။ “ခွေးကောင်စီက စေလွှတ်လိုက်တဲ့ ခလရ (၄၃၇) တပ်ရင်းနဲ့ ခလရ ၃၈၇ တပ်ရင်းနှစ်ရင်းလုံးက တပ်ရင်းမှူး နှစ်ဦးလုံး ကာလနာတိုက်ကုန်ကြပြီး ခလရ ၄၃၇ တပ်ရင်းမှူးအလောင်းကိုတော့ နွမ်လျန်ရွာ မှာ ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် လာရောက်သယ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပေမယ့် ခလရ ၃၈၇ တပ်ရင်းမှူးကတော့ အလောင်းတောင် ပြန်မသယ်နိုင်ပဲ ပိုးစိုးပက်စက် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြတယ်။(မူရင်းအရေးအသားအတိုင်း)”စသည်ဖြင့်ရေးသားပြီး […]
March 16, 2021 March 16, 2021 နေရာမောင်LeaveaComment on Fact Check: ဒီပုံတွေက KIA နဲ့ တပ်မတော်အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပုံမဟုတ်ပါ
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးလက်နက်ကိုင်(Kachin Independence Army)က စစ်ကားတစ်စီးကို ဖောက်ခွဲပြီး စစ်သားသုံးယောက်နဲ့ လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖမ်းမိတယ်လို့ ရေးသားထားတဲ့ပို့စ်ကို ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူ ထောင်ပေါင်းများစွာက ပြန်လည်မျှဝေထားပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဓာတ်ပုံတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်များအတွင်း ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီးဓာတ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုကွန်ယက် အသုံးပြုသူတွေကို နားလည်မှုလွဲစေနိုင်ပြီး ပျံ့နှံ့မှုအားကောင်းခဲ့တဲ့ပို့စ်ကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရပါတယ်။ “8. 3. 2021 ရက်နေ့ ( 10..30..အချိန်မန်းလေးမူဆယ်လမ်းကြောင်းတွင် အသင့်စောင့်နေသော KIA. မှ မအလ ကားတစ်စီးနဲ့လော်ဘီသုံးယောက်လက်နှက်ခဲရမ်းများနင့်အတူသိမ်းဆဲလိုက်ကြောင်းသရပါသည် ”လို့ ရေးသားထားတဲ့ပို့စ်ကို “Min Min Oo”အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူက မျှဝေထားပါတယ်။ တူညီစွာရေးသားထားပြီး ပျံ့နှံမှုအား ကောင်းခဲ့တဲ့ပို့တွေကို ဒီနေရာနဲ့ ဒီနေရာမှာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ မူရင်းလင်ခ့် – Fb link | Archive link အချက်အလက်စိစစ်ချက် ဓာတ်ပုံကို Google […]